“Madaxweyne Biixi qodax baa ka horraysa” Siyaasi Jaamac Ku-jare | Berberanews.com
Home WARARKA “Madaxweyne Biixi qodax baa ka horraysa” Siyaasi Jaamac Ku-jare
“Madaxweyne Biixi qodax baa ka horraysa” Siyaasi Jaamac Ku-jare
Hargeysa-(Berberanews)-Abwaan Cismaan Ku Jare oo ka mid Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani, ayaa ka hadlay safar la hadal hayo inuu Madaxweynaha Somaliland maalmaha soo socda ugu kicitami doono Magaalada Burco.
Siyaasi Cismaan oo maanta Saxaafadda kula hadlay Hargeysa, ayaa rajo xumo ka muujiyay safarka Madaxweynuhu ku tegi doono Buroc isagoo sheegay in madacexweynuhu muddada saddexda sano ah ee uu xilka hayay aanu waxba u qaban bumshada. Sidaas daraadeedna safarkiisa uu kala kulmi doono qodax.
“Madaxweynaha waxa uu hadhay 2 sanadood wax alaale wax uu ka qabtay ballanqaadadii Gobolka Togdheer, Sanaag iyo Sool ma jiraan. Markaa dee sabab uu u tago anigu ma garanayo. Madaxweynaha qodax baa ka horraysa, shaqaaluhu eryay gobolladaasay ahaayeen, diyaaradihii uu xidhay Gobolladaasay ahaayeen iyi hudheelladii uu xidhay, waxaaso dhani waa qodaxdii uu dhigay Madaxweynuhu. Markaa sabab uu maanta halkaa ku tago anigu garan maayo.” Sidaa waxa yidhi Abwaan/Siyaasi Jaamac.
Halkan ka daawo watbixinta Abwaan Jaamac Ku-jare oo dhammaystitan.
Previous article” Israel waan u baahanahay,” Dp World
Next articleMadaxweyne Biixi oo xilkii ka qaaday Masuul xidhan